Kitra – «Chan 2018» : miandrandra ny Barea ny Malagasy rehetra Chan 2018” | NewsMada
Kitra – «Chan 2018» : miandrandra ny Barea ny Malagasy rehetra Chan 2018”
Hitodika any Luanda, Renivohitr’i Angola, avokoa ny saina sy ny mason’ny Malagasy iray manontolo, amin’ity asabotsy ity. Ho fantatra, anio, mantsy ny ho tohin’ny dian’ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fiatrehana ny “Chan 2018”.
Vonona ny handresy an’i Angola ny Barea de Madagascar, anio, eo amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ireo mpilalao tsy matihanina na ny “, hotanterahina any Kenya.
Ho fantatra amin’ity asabotsy ity tokoa mantsy izay hiatrika izany eo amin’ny roa tonta. Tapa-kevitra ny Barea de Madagascar ary tsy matahotra, na ao amin’ny kianja mahazatra azy ao Luanda aza no hatao ny fihaonana.
Efa any an-toerana, efa hatramin’ny alarobia lasa teo, ny Barea de Madagascar ary efa nitsapa ny kianja, omaly zoma. Salama tsara avokoa izy 18 mirahalahy ary tsy manana ahiahy amin’ity lalao atao ity. Ry zareo Angoley indray aza no somary manan-tahotra, na hilalao ao amin’ny taniny aza.
Tsiahivina fa ady sahala hatrany ny isa nisarahan’ny roa tonta, tamin’ireo lalao roa natao farany, tany Angola. Amin’ity, mety mbola hitranga izay, raha ny vinavinan’ny mpanara-baovao. Ekipa tsy dia afaka loatra mantsy ry zareo Angoley, raha vao tsy misy matihanina milalao. Anisan’ny efa nanahirana azy ny nanilika an’i Maorisy, teo amin’ity fifanintsanana ity.
Tombony ho an’ny Barea de Madagascar, amin’ity lalao ity, ny tsy nahatafidiran’ny Angoley baolina tetsy Mahamasina, nandritra ny lalao mandroso, herinandro lasa izay. Eto izany, mila mampiditra baolina iray fotsiny ny Malagasy mba hanapitra ny fofon’ain’ny Angoley. Raha toa ka ady sahala misy baolina maty, izany hoe ; 1 sy 1 na 2 sy 2 tafita amin’ny “Chan 2018” ny Barea de Madagascar.
Tsiahivina fa anio manomboka amin’ny 6 ora 30 hariva eto Madagasikara ny hanombohan’ny lalao.